Indawo Eqondile Yezibalo Lapho Izinwele Ezihamba Ngayo Zisuka Kwezesizungu ziye Kubudlabha - Ubuhle
Indawo Eqondile Yezibalo Lapho Izinwele Ezihamba Ngayo Zisuka Kwezesizungu ziye Kubudlabha
Kube ubuhlakani obujwayelekile kule mpelasonto njengoba imigwaqo ye-New York yesonto lezemfashini ibigcwele izinwele zezinwele zika-Annie Hall-esque: uyazi, zonke izinwele ezimoshekile, ezinganakiwe, ezisanda kuvuka ezibonakala ngathi zithi * La-di -da, la-di-da, la la. * Manje, njengoba sazi, izisetshenziswa zezinwele ezibekwe ngamasu angabukeka emuhle impela. Isibonelo, lesi sitayela sezinwele esivela kuLorick nakanjani sizowela esigabeni, awucabangi?
Imodeli esethulweni sikaLorick spring 2011 eTela Design Studio.
Kepha ngiyazibuza ukuthi ngabe ezinye zalezi zinwele ze-runway sezine-OD'ed kuma-wisps.
Imodeli esendleleni yeDoo.Ri's spring 2011 show e-Eyebeam Gallery.
asho ukuthini amaphupho aphindaphindayo
Nakhu okumele ukwenze kusuka ku-Doo.Ri ...
Imodeli esendleleni ye-Rachel Comey's spring 2011 show ePier 59 Studios.
... enye evela kumbukiso kaRachel Comey ...
Imodeli esendleleni ye-Rag & Bone's spring 2011 show.
kanye nebhantshi elixakile, le-wispy elivela kumbukiso we-Rag & Bone.
Ngicabange isikhathi eside futhi kanzima ngalesi simo sezinwele ze-wispy-ness. Ngicuphe izinombolo ezithile futhi nginqume ukuthi imfihlo yokwenza kahle kombhede ukwenza lokho 10% i-wisps, * i-90% * yezinwele zokubukeka zingabukeki zinobudlabha. Ngamanye amagama, okufanele ukwenze kufanele kube ukudweba okuyinhloko kanye ne-wisps okuthe xaxa nje okuthe xaxa, njenge-cherry ku-ice cream ebandayo iManhattan cocktail sundae.
Nicabangani nina besifazane: ukuthanda umkhuba we-wispy ogeleza ngokukhululekile noma into la mantombazane adinga ibhulashi? Vumelana nezibalo zami ze-wisp ze-hair? Ngabe ubhekana kanjani ne-wisps uma une-em? Sebenzisa noma yimuphi umkhiqizo okhethekile ukugcina kubukeka kungenziwanga kahle?
Izitayela eziningi zezinwele ongacabanga ngazo:
channing tatum futhi jenna dewan
- Iziteki. Yup, sebebuyile.
[- Izingxenye ezingekho maphakathi kancane
- Retro ponytails
Izindlela Ezengeziwe Zokuthola Ubuhle:
Unemfashini Q? Abakwa-stylists be-Glamour baphendula imibuzo yakho yemfashini ku-WhatToWear.com
Khombisa uthando lwakho: Zitholele eyethu iringi 'xox' $ 12 ku- shopglamour.com
Njengamahhala? Faka ama-sweepstakes wakamuva we-Glamour!
Izinto ezingahlelekile ziyenzeka khona manje emhlabeni wemfashini. Silandele ku-Twitter futhi uzitholele ngokwakho! (Ngeke uzisole, thina pinky-funga!)
ngenhla kwamabhuzu amnyama amadolo
izindawo zokufaka amashiya akho ngentambo
ukususwa kwezinwele kwe-laser udebe olungaphezulu
zezinwele ezahlukene ngebhokisi kwamagoda
eyodwa lapho bonke beba neminyaka engama-30